Faa'iidooyinka iyo xaddidaadda “Qaabka Soojiidashada leh” oo loo maro isgaadhsiinta horumarka (C4D) - Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah
Khariidad ahaan qaabeynta isgaarsiinta waxqabadyada horumarka, qaabka muuqaalka buuxa wuxuu bixiyaa hab feker, kaas oo saameyn ku yeelan kara sida aan u abaabulno una isticmaalno ilaha, labadaba dadka iyo raasumaalka. Waxaa jira iskudhafyo aan dhammaad lahayn oo qofku shaqaalayn karo si loo qorsheeyo loona hirgeliyo isgaarsiin hal abuur leh oo loo dhan yahay oo loogu talagalay waxqabadyada horumarinta.”- Dr. Karen Greiner
Qoraalkani wuxuu siiyaa xirfadleyda isgaadhsiinta fikradaha si ay u muujiyaan dheefaha iyo caqabadaha "qaab buuxa". Qoraagu ujeedadiisu waa inuu martiqaado milicsiga iyo wada hadalka ku saabsan micnaha ay leedahay in si qoto dheer iyo qoto dheer loo arko markii aan la xiriireyno si aan u dhiirrigelinno ficil oo aan u horumarinno isbeddel bulsheed oo wanaagsan oo ka dhaca bulshooyinka. Fikradaha iyo domainsyada lagu soo bandhigay ilahaan "qaab buuxa" ayaa loogu talagalay Noqo mid waxtar leh (oo loo isticmaalo), naqshadeeyayaasha, fuliyayaasha iyo baarayaasha wax ka qabadka wax ka qabadka isgaarsiinta. Adoo tixgalinaya adeegsiga iyo xayndaabyada agabka, qoraalkani wuxuu siiyaa naqshadeeyayaasha faragelinta C4D aragti fikradeed ku saabsan adeegsiga qaab muuqaal buuxa ah oo ka warramaysa falanqayntooda iyo geedi socodkooda qorshaynta. Xirfad-yaqaannada leh awooda ay aadaan “muuqaal buuxa,” (ama ka buuxi qaab-ka badan sidii markii hore la qorsheeyay), kheyraadkani wuxuu ku doodayaa in beeluhu badan ku hawlan yihiin oo dhiirigelinayaan, ay u badan tahay inay gacan ka geystaan ​​isbadal ku yimaada beeluladooda, isbeddelladaas sii sii waarana waa suurtagal.
Halkan kala soo bax maqaal buuxa